Kuuriyada Waqooyi oo wada-hadallo qadka kula yeelaneysa Kuuriyada Koofureed - BBC News Somali
Kuuriyada Waqooyi oo wada-hadallo qadka kula yeelaneysa Kuuriyada Koofureed
Image caption Sawir la qaaday 2005 oo muujinaya sarkaal Koofurta ka soo jeeda oo la xiriiraya dhiggooda Waqooyiga isgaoo ku sugan meel u dhow goobta milatariga ka caaggan
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in wada-hadallo dhanka qadka ah ay dib ula bilaabi doonto Kuuriyada Koofureed, si loogu gogol-xaaro wada-hadallada ku saabsan in Kuuriyada Waqooyi ay ka qayb gasho cayaaraha xilliga qaboobaha ee Olympics-ka.
Xiriirka labada dhinac ayaa dib u bilaabmi doona maanta saacadda waqtiga dalalkaasi marka ay tahay 15:30 (06:30 GMT), sida ay shaacisay wakaaladda wararka Kuuriyada Koofureed ee Yonhap.
Arrintan ayaa imaaneysa kaddib markii madaxweyne Kim Jong-un uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu wada-xaajood la galo xukuumadda Seoul uuna koox u diro cayaaraha.
Labada dal ayaanan wada-hadallo heer sare ah yeelan tan iyo bishii December 2015.
Sanadkii xigay, Kuuriyada Waqooyi ayaa jartay xiriirka, iyadoo diidday inay ka jawaabto wicitaannada, sida ay sheegeen saraakiil ku sugan Kuuriyada Koofureed.
Sarkaal ka soo jeeda Kuuriyada Waqooyi ayaa ku dhawaaqay in wada-hadallada dhanka qadka ay dib u furmi doonaan Talaadada, iyadoo telefishinka laga daawan doono.
Wuxuu sheegay in labada dal ay ka wada hadli doonaan arrimaha la xiriira in Kuuriyada Waqooyi ay wafdi u dirto cayaaraha xilliga qaboobaha ee Olympics-ka ee bisha February ka dhici doona Pyeongchang, Kuuriyada Koofureed.
Muqaalka cajiibka ah ee askariga baxsanaya Kuuriyada Waqooyi
Kuuriyada Koofureed ayaa sheegtay in ka qayb-galka Waqooyiga ee cayaaraha la soo dhoweyn doono.
Khudbad uu jeediyay Maalinta Sanadka Cusub, ayaa madaxweyne Kim Jong-un wuxuu ka hadlay hoos u dhigidda xiisadda iyo dhalaalinta xiriirka fadhiya ee Waqooyiga iyo Koofurta.
Wuxuu xusay in cayaaruhu ay fursad wanaagsan u yihiin muujinta midnimada shacabka Kuuriyada Waqooyi.
Dhanka kale Kuuriyada Koofureed ayaa soo jeedisay wada-hadallo sare, balse weli ma cadda in Kuuriyada Waqooyi ay aqbali doonto iyo in kale, laakiin wada-hadallada ay qadka ku yeelan doonaan ayaa suurto-gelin doona in wada-xaajoodyo horudhac ah ay labada dhinac yeeshaan.
Talaadadii, sarkaal Kuuriyada Koofureed ka soo jeeda ayaa sheegay inay isku dayayeen inay wacaan madaxweyne Kim tan iyo intii uu khudbaddaasi jeediyay, balse aan laga jawaabin wicitaannadooda.
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa sanadkii la soo dhaafay la soo gudboonaaday cadaadis uga imaanaya beesha caalamka oo ku aaddan barnaamijkeeda hubka nukliyeerka.